Dib-u-eegista Meelaha Casriga ah - Codes-ka Online Casino Bonus
Casino Online Xeerarka Bonus > Desert Habeenada Casino Review
Desert Habeenada Casino Review
aad u fiican (634 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Active tan: 2006
Review of Desert Habeenada Casino
Meelaha Desert waa khaanad casri ah oo Mareykan ah oo ay leedahay oo ay maamusho koox adag oo Deckmedia NV ah, oo leh sumcad wanaagsan oo loogu talagalay jimicsiyada casinos sida Sloto'Cash, Miami Club, iyo Spartan Slots. Casino waxaa markii hore la bilaabay barnaamijka Rival, ka dibna 2012 waxaa loo raray adeegsiga RTG software oo leh barnaamijka Rival ee weli ku ordaya ciyaartoyda hadda jira. Hore u sii gudbi 2014, Deckmedia waxa ay go'aansatay in ay dib u soo celiso kooxda RTG ee casiniga ah ee loo yaqaan "Uptown Aces", waxaana ku soo laabaneynaa Nights Plains oo ah casino kaliya. Waxaa laga yaabaa inay jahawareer ku dhacdo, laakiin isbeddelkan ayaa keenay in la qabto munaasabadda madadaalada, ama ay ahaayeen kuwa yaryar oo si fiican uga soo baxa marka wax la isku daro?
Isticmaalka Rival Gaming, Meelaha Desert waxaa laga yaabaa in ay ka yara duwan tahay inta badan ee noo American asxaabtu waxay arkeen markay arkeen casino casri ah. Ciyaartoyda doonaya inay galaan ficilku waxay doonayaan inay hubiyaan in ay soo dejiyaan software-ka casabiga, maadaama qaar ka mid ah magacyada la heli karo aan lagu bixin goobta bogga ciyaaraha ee casino. Ku rakibidda iyo isdiiwaangelintu waa burqad, qaadashada kaliya daqiiqo ama laba si aad u hesho gebi ahaanba. Markaad dejiso, waxaad ogaan doontaa in ay jiraan daraasado fiidiyoow ah, miiska miiska, khamaarka fiidiyowga, iyo ciyaaraha khaaska ah ee la heli karo ciyaaraha.
Meelo waa qurux badan oo ka mid ah Desert Nights, laakiin ma heli doontid ciyaaraha ruqsadda leh ee ugu sareeya sida aad ka rabto a Microgaming, Playtech, ama Entertainment Entertainment. Ciyaaraha ayaa aad u barbardhigi karta boosaska RTG, waxaana jira waxyaabo dhab ah oo aad ka heli karto si aad u tijaabiso. Qaar ka mid ah mashiinnada yaryar ee ugu fiican waxaa ka mid ah "Scary Rich" oo leh miisaan weyn oo ballaaran, Hole ee Won taas oo ah gole kubbadda cagta ah oo leh kubad cajiib ah oo ku salaysan kubbadda casriga ah, iyo Spartan Warrior kaas oo ku abaalmarin kara 100 bilaash ah oo leh 3x haddii aad nasiib badan tahay. Intaas waxaa dheer, waxaa jira tartan i-dhexdhexaad ah oo i-dhexdhexaad ah kuwaas oo ciyaaraya sheekooyin sheekeysi oo isku xiran oo muujinaya inaad ciyaareyso.
Waxaa jira qaar ka mid ah 6-sawirada jackpot ee jaangooyooyinka soo koraya ee ku saabsan bixinta munaasabada Desert Nights, iyadoo cas casino bixinaya abaalmarin weyn oo ku saabsan Hal Milyan Rikoodh BC, Major Moolah, Money Magic, iyo Weerarka Gold. Waxaad arki kartaa qiimaha hadda ee hoose ee boggan xaadirka ah ee tracker ee jackpot. Fursad cad oo ah in dukaanku uu ka sarreeyo tartanku waa mid aan ka duwanayn qadka Casinos, Dhulka Desert Nights ayaa ku siin doona qadarka lacagta ku filan oo dhan hal mar haddii aad ku guulaysato, halkii aad ka heli lahayd qorshe lacag-bixin bille ah sanadkiiba.
kulan Table sidoo kale waxaa laga heli karaa Habeenada Desert, oo qurbaankii casino blackjack, Saddexda Poker Card, roulette, Craps, Sic-Bo, iyo in ka badan. Jadwalka miisaanku guud ahaan wuu hooseeyaa, waxaana jira waxyaabo kale oo kala duwan oo isku dhejin kara kabo soo dhawayn leh ama labo ah oo loogu talagalay fasalka Vegas.
Banking and Support Customer
Deckmedia waxaa ku yaala casinos guud ahaan si fiican ayaa loo ordi doonaa dhamaadka waxyaabaha dhabta ah, samaynta Goobta Cilmi-goobeed oo ah meel xasiloon oo loogu talagalay ciyaartoyda si ay u dhigaan oo ay lacagta uga noqdaan. Sida aan ognahay, USA-waxaa ah casinos xaddidan marka ay timaado fursadaha lacag bixinta, iyo Meelaha Desert uusan lahayn wax ka reeban. Xilligan la aqbalo foomamka kaydka waxaa ka mid ah kaararka deynta iyo debititka iyo boorsada elektarooniga ah, iyadoo ciyaartoyda Maraykanku xaddidan yihiin inta badan xulashadooda caag ah.
Ciyaartoyda waa ay awoodaan in ay codsan Transfer Bank ah, EcoCard, Neteller, ama bixitaanka Skrill, oo ay weheliyaan jeeg warqad ah. Waa in la ogaadaa in Habeenada Desert waa mid aad u dhakhso ah marka ay timaado howlgalo bangiyada ay, sida lacag dhigaal ah waxaa si deg deg ah u maareeyeen, iyo lamoodaa waxaa la maalmood oo shaqo 2-3 gudahood, inkastoo ciyaartoyda American codsanaya jeeg filan waa in ay sugaan in toddobaadkii ka hor inta yimaaddo in gacmahooda. Tani waa qaab dhismeedka waqti mudan, in kastoo meel u dhow ugu dhaqsiyaha badan in industry ee. Si kastaba ha ahaatee waxaan ku dhif maqlay qof dhalna sharci ah la Deckmedia bixinta guuleystayna.
Mid ka mid ah wax aan niyad la kastoo xad bixitaanka todobaadle yar. Habeenada Desert hadda xaddidaya soo bixid in $ 2000 toddobaadkii, guuleystayna Ghanna horumar laga saaray sida kor ku xusan. Iyada oo ay tani laga yaabaa in aan khuseeyaan dadka intooda badan la ciyaari doonta tiirarka hooseeyo, kuwa idinka mid ah oo jecel in ay sharad xaddi weyn waxaa lagula talinayaa lahaa in la raadiyo casino leh xadka sare.
adeegga macaamiisha waa mid aad aqoon ugu arimaha kasta oo iman kara ama su'aalo punters laga yaabaa in, iyo waxaa laga heli karaa 24 / 7. Wakiilada waa heegan si ay u caawiyaan via fariin deg dega ah, email, telefoonka, iyo fax.
Habeenada Desert waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee farabadan ay qireen xumo ee casinos soo horjeeda. software The si qumaati ah, kulan waa midabo iyo inventive, iyo casino aqbalo ciyaartoyda American. Inkastoo aan jeclaan lahaa waxaa jiray xadka sare todobaadle baxaan, waxaa runtii ma aha wax badan oo kale oo noo inaad ka cabato la casino this.
1 Desert Habeenada Casino
3 Review of Desert Habeenada Casino
4 Software iyo Games
5 Banking and Support Customer